Nagu saabsan - Shanghai P&Q lamp Co., Ltd.
Shanghai P&Q Laydhka Co., Ltd.
Shanghai P&Q Lighting Co., Ltd. oo la aasaasay 2005 waa shirkad soosaara laydh xirfadlayaal u leh dhinashada-cirbadaha, cirbadda caagga ah, iyo birta xaashida ah.
Waxay ka kobcisaa mid yar mid weyn oo leh dhinaceeda dhidibbada iyo warshad isku dhafan oo ku taal Haining tallaabo tallaabo. Mashiinka shubka dhinta ee 200 tan ~ 800ton. Waxaan si isdaba joog ah u maalgashannaa qalabka cusub si aan si guul leh ula kulanno caqabadda horumar joogto ah, mar walbana waxaan siino xalka ugu habboon ee baahi kasta oo macaamiisheena ah.
P&Q ma laha cirbadeyn caag ah iyo warshad bir ah, laakiin sidoo kale waxay bixin kartaa cirbadeyn balaastig ah iyo qaybo bir bir ah sida waafaqsan macaamiisha looga baahan yahay.
Waxayna ugu wacan tahay seddex mabaadi'da aasaasiga ah ee aan u hoggaansameyno sanadahaas xirfadlayaasha nalalka, daacadnimada macaamiisha, iyo mas'uuliyadda nafteena. Sababahan awgood, waxaan si tartiib tartiib ah ugu guuleysaneynaa kalsoonida macaamiisheena waxaana naloo aasaasay iskaashi wacan oo muddo dheer soconaya oo lala yeelanayo shirkadaha caalamiga ah ee caanka ah adduunka, sida Braums Australia, Pierlite, Gerard Lighting Group, SYLVANIA, LENA Lighting, LUG Light Factory , iwm
Qalabka Soo-saarista Hi-Tech
Qalabkayaga wax soo saar ee asaasiga ah waxaa toos looga keenaa Taiwan.
Injineero khibrad leh ayaa gacan ka geysan kara xalinta dhibaatooyinka kala duwan inta lagu jiro naqshadeynta iyo marxaladda wax soo saarka.
Wax soosaarka laga soo saaray warshadaha la aqoonsan yahay ee P&Q ISO9001 ee tayada horumarka tayada adag ee la kulmaya America, Australia iyo heerarka yurub.
Shirka P&Q Warshad
Nalalka P&Q ee uu aasaasay Frank Ji, warshadu waxay ku taal Songjiang, Shanghai
P&Q waxay lashaqeeysaa soo saaraha nalalka ugu weyn Australia Gerard Lighting Group.
Aqoon-isweydaarsiga dhimista P&Q ayaa la aasaasay. Factory ISO9001 shahaado.
P&Q shubay dhinta iyo warshad shirka u guurto Haining, Zhejiang,
Wax soo saarka &&& waxsoosaarka bilowga hawlgalka oo ku saleysan nidaamka ERP.
Waxaan khubaro ku nahay naqshadaha jarista qalabka dhimista ee goynta iyo qaabeynta qaybaha. Qalabkani wuxuu hagaajiyaa isku mid ahaanta wuxuuna u oggolaanayaa in lagu gaaro shuruudaha cabbir la'aanta iyada oo aan loo baahnayn hawlgallada mashiinnada dheeraadka ah.
Dhameynta Dusha sare
Daaweynta dusha sare ee gaarka ah iyadoo loo eegayo shuruudaha iyo hababka xiga.
Qolalka wanaagsan ee lagu nadiifiyo gariirka abrasive iyo xarumaha birta toogashada kubad biraha suurto gal ka dhigeysa in la gaaro dhameystir dusha sare oo tayo sare leh.
P&Q waxay maamushaa hawlgallada kale ee dhammaystirka gaarka ah ee la codsaday
(daahan, nadiifin, iwm), oo leh dammaanad buuxa oo tayo iyo natiijooyin kama dambays ah leh.
Kiis Soo bandhigid
Hawlo Cajiib ah oo Kooxdayadu 'Ku darsadeen Macaamiisheena!